အူဘန်းတုနဲ့ ဒီလိုလုပ်မိတယ် — MYSTERY ZILLION
December 2007 edited April 2011 in Ubuntu
ကိုစေတန် ကညွှန်းလွန်းလို့ အူဘန်းတုကို စမ်းချင်တဲ့ ပိုးကထကြွသောင်းကျန်း လာပါတယ်
အဲဒါနဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးလုပြီး ubuntu နဲ့ kubuntu ကိုဒေါင်းလိုက်ပါတယ် ISO ဖြစ်နေလို့ nero7
ုkorea လိုနဲ့ ဒုက္ခတွေများနေသေးတယ် ကိုစေတန်ပြောပြလို့ ရသွားတယ် အဲဒီမှာစတွေ့တာ:((
အဲဒါနဲ့သူဋ္ဌေးကွန်ပျုတာမှာ ၀မ်းသာအားရ ubuntu ကိုတင်လိုက်ပါတယ် (အဲဒီ စက်ရုံမှာ အလုပ်၀င်
တာ တပတ်ပဲရှိသေးတယ် ကိုယ့်ကွန်ပျုတာ ကမပါလာဘူး) ubuntu ကညွှန်းသလို တကယ်လှပါတယ်
ဒါပေမယ့် သုံးရတာနည်းနည်းရိုးတယ် ဆိုပြီး kubuntu လေးထပ်တင်ကြည့် အုန်းမယ်လို့စိတ်ကူးရတာနဲ့ ထပ်တင်ကြည့်ပါတယ် ၀င်းဒိုး အင်စတောလည်း ပြီးရော ဟား လန်ထွက်နေတာပဲ kubuntu က ကြည့်လို့တောင်မ၀ဘူး ဒါနဲ့တောင်စမ်း မြောက်စမ်းနဲ့ ကွန်ပျူတာလေး ပိတ်ပြီး အခန်းပြန်အိပ်နေတာပေါ့ မနက်လည်းမိုးလင်းရော အလုပ်၀င်ပြီး tea time
လေးနားနေ တုံး သူဋ္ဌေး နယ်ထိပ်ကိုမြွေပွေး အကောင်တရာလောက် ကိုကိခံရတဲ့ ပုံနဲ့ရောက်လာပြီး
လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး ရုံးခန်းကိုခေါ်ပါတယ် ရုံးခန်းလည်းရောက်ရော ကွန်ပျုတာကိုပြပြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း
လို့ပြတယ် လားလား ကိုရွှေ ုkubuntu တက်နေတာက်ုိး ကိုယ်ကတော့ အေးဆေးပေါ့ ဂင်ချန်းနားဆိုပြီးတော့ ရီစတပ်လေးလုပ် ခန့်ခန့်ကြီးကြည့်နေတာ ပေါ့ ပြန်လည်းတက်လာရော သူ့
xp ကြီးမရှိတော့ဘူး ဟာဆိုပြီးနောက်တခါ ရီစတပ် ပြန်လုပ် ပြန်ကြည့် အကယ်ကို xp ပြောက်သွားပါတယ် အဲဒါနဲ့ပဲ ကိုရွှေသူဋ္ဌေးက အဲဒီ XP မှာ ဘဏ်စာရင်းကော အလုပ်သမားတွေရဲ့
time card စာရင်းပါ ပါသွားတယ်ဆိုပြီး လစာကို နောက်လ မှပေါင်းရှင်းပါမယ်တဲ့ ကျန်တဲ့အလုပ်သမား
တွေရဲ့ အငြူအစူ မခံရအောင် အလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား မှတ်ချက် (သူဋ္ဌေးလိမ်တာဖြစ်ပါတယ် သူ့ကွန်ပျုတာ ရှပ်ဒေါင်းချမရတာကို ကိုယ်ပဲလုပ်ပေးထားတာ ဘာမှမရှိဘူး
ဂိမ်းတွေပဲရှိတယ် သူလည်းဂိမ်းကစားဖို့ ပဲ ကွန်ပျုတာကို သုံးတတ်တာ):14::14::((:((
boot file ပြန်ရေးလိုက်ရုံပဲလေ...
xp အတွက် boot တက်ဖို့ လမ်းကြောင်းပျောက်သွားတာ..
ubuntu မှာ ပြန်ရေးလိုက်ရုံပဲ...
အဲလိုဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး... :2:
XP ပြန်ခေါ်ချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ...
ဝမ်းနည်းတယ်ဗျာ.. တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး.. :2:
အဲဒီ XP ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ မရှိတော့တာ မင်္သကာလို့ XP CD ထည့်ပြီး ကိုပြန်ကြည့်တာ
ပါတီးရှင်း မှာ အမ်နူန်း ဆိုပြီး အူဘန်းတု နဲ့ ကုဘန်းတု နှစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ် ကျန်
တာက ဖရီးတွေ ဖြစ်နေတယ်လေ အဲဒီကွန်ပျုတာကို ကျွှန်တော်ပဲ ၀င်းဒိုးပြန်တင်ပေး
တာလေ အဲဒီနေ့ တနေကုန်ပဲ ဂိမ်း ၂၄ မျိူးတိတိ ထည့်ပေးခဲ့ရပါတယ် (အမြင်ကတ်
လို့တောင် us ဖော်မတ် နဲ့ခင်းပေးခဲ့တာ ဒင်း အင်စတော လုပ်ရင်ထိပ်တိုက်တွေ့မယ်
ဒီကောင်တွေ E လို တလုံးမှမရဘူး) ပြောရင်းနဲ့ တောင်စိတ်နာလာပြီ :14::14:
နောက်ကို ဂင်ချန်းနားလို့မပြောနဲ့ ဘောရီအော့လို့ပြောရတယ်
:2: ဖတ်ရတာတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါမျိုးတွေ့တာနှစ်ခါရှိပြီ(အလုပ်ထုတ်တာပြောပါတယ်)
တခုက စက်တင်ဘာ ကိစ္စတွေတုန်းက ဗမာ blogger တစ်ယောက် သတင်းတွေကို uptodate နေ့တိုင်းရေးနေလို့ production ကျတယ်ဆိုပြီး အလုပ်ထွက်ခိုင်းတာဖတ်ရဘူးတယ်။
နောက်ကို အိမ်ရောက်မှ စိတ်တိုင်းကျစမ်းပါလား .. ခုဟာက Boss စက်ကြီးဆိုတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ကိုယ့်စက် လျှောက်ပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ :106: .. ဆရာလုပ်တာဟုတ်ဘူးနော်
ကျွန်ပျူတာသမားဆိုတာ .. Backup အဆင့်သင့်ဖြစ်နေရမယ်။
ကျနော်တော့ သေချာတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျာ။ အင်းလေ အလုပ်လည်း ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ... သိပ်ခေါင်းစားဖို့ မလိုတော့ပါဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အူဘန်တူ အင်စတောတာ ဘာမှပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ၀င်းဒိုးစ်လည်း မပျောက်ခဲ့ပါဘူး။ တခုဘဲ ရှိတယ်။ အော်တိုအနေနဲ့ သူကအရင်တက်တယ်။ ၀င်းဒိုးစ်ကိုလိုချင်ရင် ရွေးပေးရတယ်။ ဒါလည်း ကိုစေတန်ပြောပြတာနဲ့ နည်းနည်းပြန်ပြင်လိုက်တာ အိုကေပါတယ်ဗျာ။
အင်္ဂလိပ်လို see you
မြန်မာလို တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျာ (ဟီး ... ဘာသာပြန်တော်တယ်နော်)
Xp ပျောက်သွားတာရယ်၊ ဘယ်ဟာ အရင်တက်မလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုရွေးပေးရမလဲ ဆိုတာလေးရယ် ပြန်ပြောပြပါအုံး ကိုစေတန်ဂေါ့။ ကျွန်တော်လဲ အကိုတို့ ရေးတာကြည့်ပြီး အားကျလို့ အခု အူဘန်တူ ကိုအင်စတောလုပ်ဖို့ ပြင်နေလို့။ တကယ်လို့ အဲဒါတွေကျွန်တော့်ဆီမှာ ဖြစ်လာရင် လုပ်လို့ရအောင်ကြိုမေးထားတာပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လင်းနစ်ကို အခုမှ စသုံးမှာ။ ဟီးဟီး.. အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား အမ်ဇက်မှ အစ်ကိုများ း) ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်လျက်.. း)
if u wanna dual boot with ubuntu and xp..I recommand to choose ubuntu..
cause it can challenge to compare vista 3D style and so many...many
moreover u wanna dualboot of it..first see this web site below and do step by step by of it..
or further u wanna know about just ask in here..i will answer all of ur problem in here
ကျွန်တော့် Ubuntu ကို တော့ စက်လေးလို့ uninstall ချလိုက်တာ ရှိတဲ့ window xp လဲ boot မတက်တော့ ဘူး BIOS ပြီးတာနဲ့ error တက်တော့ တာပဲ။ အစ အဆုံး format ပြန်ရိုက်ရတယ်။ အဲ အဲဒီလို ပြဿနာဖြစ်ရင် ပြင်လို့ရတဲ့နည်းများရှိလားဗျ။ တွေးကြည့်ရင် အသည်းနာလွန်းလို့ နည်းလေးရှိရင်မျှကြပါ။:((
Acronis BootManager နဲ့ ဆိုရင်ကျိန်းသေရမှာပါ။
ကျနော် အရင်ကစမ်းဖူးပါတယ်။ သူ့ဘာသာသူ OS တွေကို ရှာပေးပါတယ်။
OS တွေအကုန်လုံးနီးပါးကို သိမှာပါ။ ကျနော် ၂၀၀၂ အကုန်လောက် Windows Server 2003, RC2 စပေါ်လောက်တုန်းက စမ်းတာ ပေါ်ခါစ Windows 2003 ကိုပါသိပါတယ်။
အခုတော့ Acronis Disk Director လိုခေါ်တယ်။
OS ၁၀၀ ကျော်သိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး Same Partition မှာတောင် Multiboot ရအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။
ဖရီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေရှယ်နယ်စီဒီဆိုင်မှာ ဖြစ်ဖြစ်သွားရှာရင်ရှိမှာပါ။
၀င်းဒိုးနဲ့ အူဘန်းတု ၂ခုတင်ထားပါတယ်။ အခု ၀င်းဒိုးအသစ်ပြန်တင်တာ အူဘန်းတုက တက်မလာတော့ဘူး။ အူဘန်းတု ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး:13:။ အဲဒါ အူဘန်းတုကို ပြန်ခေါ်လို့ရသေးလားခင်ဗျာ။ ဘယ်လို့ပြန်ခေါ်ရပါသလဲ။ ကူညီကြပါဦး Mz မှ ညီအကိုများခင်ဗျား:77::77::77:
Acronis OS Selector လေးရှာပြီးစမ်းကြည့်ပါလား။ အင်စတောလုပ်ပြီး စက်ရီစတတ်လုပ်ရင် ရှာပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ကျနော် နောက်ဆုံးဗားရှင်းတော့ စမ်းမကြည့်ဖူးဘူး။ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။
ဒီကတော့ official web site
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ စီဒီဆိုင်မှာ ရမယ်ထင်တယ်။
Mgsun wrote: »
XP ပေါ်ကနေ အူဘန်းတု CD run ပြီး ပြန်ရှာကြည့်ပါလား၊ Disk Volume ကို မှတ်မိရင် ပြန်ရနိုင်ပါတယ်..
ဥပမာ (C:,D:,E:)လား၊ အူဘန်းတု က Disk Volume ပိုင်မှာ အားနည်းချက်တွေရှိလို့
ကိုမာခ့် ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်လေးရှိရင် ပေးပါလား။ ကျွန်တော် rapid ကနေဒေါင်းတာ မရဘူူးဖြစ်နေတယ်။ အစ်ကိုပေးတဲ့ လင့်ခ် ကို၀င်ကြည့်တာ ဒီကောင်လေးက good တယ်ဗျ။ လိုချင်လို့။ Acronis OS Selector 8.0 နောက်ဆုံး ဗားရှင်းလေးရရင် ပိုကောင်းမယ်:D။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ:1::1::1:
ကျေးဇူးပဲ အစ်ကိုရေ.........ရသွားပြီ။ CD ထဲ့ပြီး အူဘန်းတုကို repair လုပ်သလို ပြန်ပြီး အင်စတောပြန်လုပ်၊ အူဘန်းတု ၀င်မဲ့ login name နဲ့ password ကိုအသစ်ပြန်ရိုက်ပြီး တွယ်လိုက်တာ ပြန်တက်သွားပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ:1:။
ကျေးဖူးပဲဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းမစမ်းခင် ကြိုဖတ်ထားလိုက်အုံးမယ် ။
အဲ။ ကျနော် reply ကို မတွေ့လိုက်မိဘူးဗျ။ လိုသေးလား အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲ?
ဟုတ်ကဲ့... ရှိရင်ပေး ပေးပါ အစ်ကို.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟာ ကိုစေတန်ရေ လုပ်ပါအုံးခင်ဗျာ ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဖူးတယ် ကျွန်တော်က window ထဲကနေ ubuntu တင်ထားတဲ့ partition ကို သွား delete လုပ်မိတာကနေ boot file ပါပျောက်သွားတာ တစ်ခုမှမတက်တော့ဘူး (ubuntu & window) hiren boot CD က mini window နဲ့၀င်ကြည့်သေးတယ် မရဘူး တစ်ခြားစက်မှာ secondary တပ် data ယူပြီးမှ format ရိုက်လိုက်ရတယ် အဲဒါ အစ်ကိုပြောတဲ့ ubuntu ထဲ မှာ boot file ရေးနည်းလေးပြောပါအုံး ကျွန်တော်က အခုမှ စသုံးတယ်သူဆိုတော့ နားလည်လွယ်အောင်လေး ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ အားကိုးပါတယ် အစ်ကိုရယ်.....
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ .. ကျွန်တော်လဲ အဲ့လိုဖျက်မိတာ ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုပြတာ ပြန်ရသွားတယ်။ Grub Error ဖြစ်တာနဲ့တူတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲတောင်မမေးမိလိုက်ဘူး။ ပြန်ရတာနဲ့ အပျော်လွန်သွားတာ။
ကိုစေတန်ရေ .. အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကူညီပါအုံး။ ကိုရဲတို့ နောက်ပြီး MZ က အဲ့ဒီ အပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နားလည်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် နားလည်အောင် ရှင်းပြကြပါအုံးဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်း ပြန်စမ်းချင်တာနဲ့
ကျွန်တော် လမ်းကြုံတုန်းတစ်ခါတည်း ဝင်မေးလိုက်ဦးမယ် :P ကျွန်တော် ဝင်းဒိုးနဲ့ ubuntu ကို တွဲတင်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်စက် dual core 2.5 ghz memory2GB DDR2 harddisk 250 ပါ။ တွဲတင်လို့ရလား။
window74GB 64bit ပေါ်မှာ ubuntu 32bit လေးတင်ချင်တယ်
တင်လို့ရနိုင်မလား တင်လိုက်ရင် ဘာ error တွေများတက်လာမလဲ သိ်ချင်လို့ ကိုစေတန် နဲ့ကိုဘောက်စ်
ကbuntu ကို 32bit ဘဲ ကြိက်လို့ပါ။အဲဒါလေးသိချင်လို့ပါ။ 64bit မသုံးချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တော့ Windows764bit မှာပဲ Ubuntu ကိုတင်ထားပါတယ်။ ရပါတယ်။ ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။ Wubi နဲ့တင်မရဘူးဆိုရင်တောင် CD ကို Boot တက်ပြီးတော့ Install လုပ်ပါ။ အဲ့ဒါက ပိုပြီးတော့ မိုက်တယ်။
64 Bit နဲ့ 32 Bit ဘယ်ဟာကိုကောင်းလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မျိုးလဲမသိ။
တကယ်က ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲ နည်းနည်းစကားပြောမယ် ပုံမှန်အနေနဲ့ Ubuntu Repo တွေထဲက ဆော့ဝဲတွေပဲ ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး 32 or 64 bits ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြားကဆော့ဝဲတွေ ထည့်ချင်ရင်တော့ ပြဿနာပေးပါတယ် အတော်များများက 64 bits အတွက် binary မရှိပါဘူး အများအားဖြင့် 32 bits အတွက်ပဲရှိပါတယ် deb ပေးထားရင်တောင် 32 bits အတွက် လုပ်ထားတာဆိုရင် 64 bits မှာ ထည့်မရပါဘူး။ အဲဒီ့ဆော့ဝဲတွေက Open Sorce ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ 64 bits အတွက် Compile လုပ်ယူရပါတယ် ဒီနေရာမှာလည်း သူတို့သုံးထားတဲ့ Library တွေကလည်း 64 bits အတွက် မရှိခဲ့ရင် အဲဒါတွေကိုလည်း အရင် Compile လုပ်ရပြန်တယ် အဲဒီတော့ လုပ်နေကျမဟုတ်ရင် ပြဿနာတက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Open Soruce မဟုတ်တဲ့ Application တွေရှိပါတယ် အဲဒါတွေ အတော်များများက 32 bits အတွက်ပဲ Binary ရှိတာများပါတယ် Adobe လိုဟာတွေတောင် 64 bits အတွက် ထုတ်မပေးထားပါဘူး။ Flash, Air အဲဒါတွေ အခုထိ 32 bits ပဲရှိပါတယ် အဲဒီတော့ Flash လိုဟာက Firefox လိုက အလိုလိုရှင်းပေးနိုင်ပေမယ့် Air လိုဟာက 32 bits ကို 64 bits မှာသုံးလို့ရအောင်က နည်းနည်းကြံရဖန်ရပါတယ်။
အဲဒိတော့ ကိုယ်ဘာသုံးမယ် ကိုယ်အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်သုံးဖြစ်တယ် ဆာဗာအဖြစ်သုံးမယ် အဲလိုဆိုရင်တော့ 64 bits or 32 bits ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဆော့ဝဲတွေက Repo တွေထဲမှာ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် binary ရှိပြီးသားပါ ဒါပေမယ့် Develop လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းစဉ်းစားပါ ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ 64 bits အတွက် ရှင်းနိုင်ရင် 64 bits ကိုသုံးလို့ရပါတယ် မဟုတ်ရင်တော့ 32 bits ပဲသင့်လျော်ပါတယ်။ တကယ်က သုံးရတာဆော့ဝဲထည့်ရတာ လွယ်တယ်လို့ပြောကြတာ apt လိုဟာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ အကြောင်းအရာလောက်ကိုပြောတာပါ တကယ်တမ်း Develop လုပ်စတမ်းဆိုရင်တော့ Linux ဟာအင်မတန်ပြဿနာရှုပ်တဲ့ OS ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုလူပျိုကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျနော် တကယ်သုံးချင်တာက 32 bit ပါ။ဒါပေမဲ့ ကျနော့်စက်က 4Gb win764 bit ကြီးဖြစ်နေတယ်။
ကျနော်သိချင်တာက အဲဒီစက် 64 bit အပေါ်မှာ ubuntu 32 bit တင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမလား ဆိုတာပါ။
Memory 4GB သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဆင်အပြေဆုံးက 64 bit ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် 32 bit ဟာ သီအိုရီအရ အများဆုံး 4GB အထိလက်ခံနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တင်လိုက်ရင် 3GB လောက်ပဲ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် 32 bit သုံးချင်ရင်လည်း ရတာတော့ရပါတယ် Physical Address Extension (PAE) ကိုတော့ Install လုပ်ဖို့လိုပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့် Install လုပ်ချိန်မှာ RAM ဟာ4GB ကနေအထက်ကို တွေ့တယ်ဆိုရင် PAE ဟာ အလိုအလျောက် ထည့်သွားတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေလည်း Processor အပေါ်မူတည်ပြီး မသိတာရှိပါတယ် အချို့ Processor တွေဟာ PAE ကို Support မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ နှစ်မျိုးရှိမယ်ဗျာ 64 bit သုံးရင်သုံး ဒါမှမဟုတ် 32 bit သုံးပြီး PAE ကို Install လုပ်ပေါ့။ 64 bit processor ဖြစ်နေလို့ 32 bits တင်လို့မရတော့ မရှိပါဘူး တင်ချင်ရင် တင်လို့ရပါတယ် အဲဒါက ပြဿနာမရှိပါဘူး။
ကျေးဇူးဘဲဗျာ ကိုလူပျိုကြီး ကျနော် Try ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။အဆင်မပြေတာရှိရင် ကျနော်လာပြီး နှိပ်စက် မေးခွန်းတွေမေးပါဦးမယ်
လောလောဆယ် ကျနော်ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။တခုထပ်သိချင်တာက PAE ကို manually ဘယ်လို install ထည့်ရမလဲ ဆိုတာလေး ပြောပေးပါဦး။
ကိုလူပျိုကြီးပြောသလို့ သူ့ဟာသူ ထည့်သွားတယ်ဆိုရင် ပြသနာမရှိပေမဲ့ ကိုုယ့်ဟာကို ထည့်ရမယ်ဆိုရင် guide line လေးပေးပါဦး။
Install လုပ်တာကလွယ်ပါတယ် ကိုယ်လိုက်လုပ်ရတာမှ မဟုတ်ပဲ
ပြီးရင်တော့ Restart ချလိုက်ပါ အဲဒါဆိုရပါတယ်။ မေးတာမေးပါ ကျွန်တော်သိရင် ဖြေပါတယ် မဟုတ်လည်း ဖြေဖို့ဝင်ထားတာပဲ နှိပ်စက်တယ် မအောင့်မေ့ပါဘူး။
ရတယ်။ ရတယ်။ ရတယ်။ ရတယ်။
ရ ဆိုပြီး လိုတိုရှင်း ရီပလိုင်းချင်တာ ၁၀ လုံးပြည့်မှ ရမယ်ဆိုလို့။ ကဲ
ကြုံလို့သိချင်တာလေး မေးချင်ပါတယ်် ubuntu 10.04 မှာ wine offline install လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးကျပါအုန်း အခု zawgyi နဲ့ vlc player တော့ install လုပ်ပြီးပြီ .exe applications တွေကို ubuntu မှာ wine နဲ့ install လုပ်ရင်ရတယ်ဆိုလို့ပါ။
nailynn wrote: »
အောက်မှာပြထားတဲ့နေရာကနေ deb တွေ Download လုပ်လို့ရပါတယ် ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Version ကို Download လုပ်ယူပါ။ ဒါပေမယ့် သိထားဖို့လိုတာက EXE တိုင်းတော့ Wine နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကိုစေတန် xp အတွက် boot တက်ဖို့ လမ်းကြောင်းပျောက်သွားတာ..
ubuntu မှာ ဘယ်လိုပြန်ရေးရသလဲ?
ubuntu မှာ ဘယ်လိုပြန်ရေးရသလဲအစ်ကို
ကျွန်တော်အရမ်းသိချင်းလိုပါ ကျွန်တော်ဆိုရင် window ခဏခဏပြန်တင်နေရလို့ပါ
ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာ ဝင်းဒိုးနဲ့ အူဘန်းတု နှစ်မျိုးတွဲတင်ထားပါတယ်။ ဝင်းဒိုးသုံးပြီး အူဘန်းတု တင်ထားတဲ့ အပိုင်းကို သွားဖျက်လိုက်တတယ်။ ဝင်းဒိုးကို restart ချလိုက်တာ ပြန်တက်မလာတော့ဘူး။ အစ်ကိုတို့ကယ်တော်မှုကြပါဦး
how to make -- us Format
i can not find any where?
ကိုစေတန်ရေ လုပ်ပါအုံးခင်ဗျာ ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဖူးတယ် ကျွန်တော်က window ထဲကနေ ubuntu တင်ထားတဲ့ partition ကို သွား delete လုပ်မိတာကနေ boot file ပါပျောက်သွားတာ တစ်ခုမှမတက်တော့ဘူး နဲ့၀င်ကြည့်သေးတယ် မရဘူး တစ်ခြားစက်မှာ secondary တပ် data ယူပြီးမှ format ရိုက်လိုက်ရတယ် အဲဒါ အစ်ကိုပြောတဲ့ ubuntu ထဲ မှာ boot file ရေးနည်းလေးပြောပါအုံး ကျွန်တော်က အခုမှ စသုံးတယ်သူဆိုတော့ နားလည်လွယ်အောင်လေး ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ အားကိုးပါတယ် အစ်ကိုရယ်.....
Ubuntu10.10 နဲ့ huawei c8600 mobile internet သုံးလို့ရလားသိချင်ပါတယ်
Boot with your Windows XP CD and Choose repair. "To repairaWindows XP installation using Recovery Console"
And then use "fixmbr" command to repair your master boot record.
Try with <a href="http://www.myanmaritpro.com/profiles/blogs/setting-up-huawei-c8600-mobile?xg_source=activity">this</a>; one !